Isendlalelo se-ozone sehluleka ukuqinisa ezindaweni ezinabantu abaningi emhlabeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ungqimba lwe-ozone, olusivikela emisebeni ye-ultraviolet, luyaqhubeka nokuba buthakathaka. Yize imbobo engaphezulu kwe-Antarctica ivala, ezindaweni ezinabantu abaningi kakhulu emhlabeni kuyenzeka okuphambene nalokhu: ukuminyana kwe-ozone kuyancipha.
Yize kungakacaci ukuthi kungani lokhu kwenzeka, ochwepheshe bathi umuntu obhekene naye ngumuntu, noma ngokunembile, ukukhishwa okungcolisayo okuphuma emkhathini.
I-ozone iyigesi enamandla amakhulu, ngokweqile, engadala ukufa ngaphambi kwesikhathi kubantu abaningi, kepha ezingxenyeni eziphakeme kakhulu zasemkhathini, ebangeni cishe elingamakhilomitha ayi-15 kuye kwangama-50, iyisihlangu sokuvikela esihle kunazo zonke angasinika uMhlaba. Lapho ama-molecule e-ozone, enama-athomu amathathu e-oxygen bamba kuze kufike kuma-99% emisebe ye-ultraviolet futhi cishe yonke imisebe ye-infrared. Ukube bekungekho kulolu ungqimba, ngabe akukho mpilo njengoba imisebe ibizoshisa ngokoqobo isikhumba nezitshalo.
Ukwazi lokhu, akumangalisi ukuthi kusukela ngo-1985, unyaka lapho kutholakala khona imbobo kule ungqimba ngaphezulu kwe-Antarctica, bonke abaholi bomhlaba bayavuma ukuvimbela ama-chlorofluorocarbon (CFC). Ama-CFC, akhona kuma-aerosols nakuma-air conditioner, phakathi kokunye, enza buthaka ungqimba lwe-ozone. Kodwa-ke, yize lokhu kuvinjelwa kunciphise ukusetshenziswa kwayo yehlulekile ukwenza ungqimba luqine.
Ngokuya ngocwaningo, obelususelwa kuzilinganiso ezivela kumasathelayithi, amabhaluni asemkhathini namamodeli wesimo sezulu, Ukuhlushwa kwe-ozone phakathi nezendlalelo eziphansi ze-stratosphere kwehlile ngokuqinile. Eqinisweni, kube nokuncipha kwamayunithi we-2,6 Dobson. Ngaphezu kwalokho, esendeni esingaphansi somkhathi ukugxilwa kuye kwanda, okuyinkinga enkulu ngoba, njengoba sishilo, i-ozone eyeqile iyingozi empilweni.
Ngeminye imininingwane, yenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isendlalelo se-ozone sehluleka ukuqinisa ezindaweni ezinabantu abaningi kakhulu emhlabeni